कसरी उत्पन्न हुन्छ तरलता समस्या ? कसरी गर्ने समाधान ? – Banking Khabar
कसरी उत्पन्न हुन्छ तरलता समस्या ? कसरी गर्ने समाधान ?
बैंकिङ खबर । कुनै कम्पनीले विनासमस्या तत्काल भुक्तान गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका ऋण वा तिरोहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न सक्नुले तरलता बुझाउँछ । जसअन्तर्गत कच्चापदार्थको भुक्तानी, करसम्बन्धी तिरोहरू, आवधिक खर्चहरू, कारोबारका क्रममा तत्काल भुक्तान गनुपर्ने तिरोहरू लगायत पर्छन् । कम्पनीहरूले यी तिरो तिर्ने माध्यम नै नगद हो । कम्पनीहरूले नगद प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात हो भने इन्भेण्ट्री, प्राप्त हुनुपर्ने नगदलगायत चालू सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरेर पनि नगद प्राप्त गर्न सक्छन् । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।
निक्षेपमा बढोत्तरी, आम्दानी, कर्जा असुली, बैंकिंग सम्पतिको बिक्री, मुद्राबजारबाट प्राप्त सापटी आदि बैंकिंग क्षेत्रको सन्दर्भमा तरलताका स्रोत हुन् भने यसको उपयोग निक्षेपको भुक्तानी, कर्जा प्रवाह, संचालन खर्च तथा कर भुक्तानी, मुद्राबजारबाट प्राप्त रकमको भुक्तानी, लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश भुक्तानी आदि मार्फत हुन्छ । यी मध्ये प्रमुख श्रोत निक्षेप हो भने यसको उपयोग कर्जा तथा लगानीको माध्यमबाट हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै समय बिन्दुमा तरलता सन्तुलनको अवस्था विरलै हुने गर्दछ । बैंकहरु कहिले तरलताको कमी त कहिले अधिक तरलताको समस्यासँग जुधिरहेका हुन्छन् । तरलता समस्या समाधानका लागि निश्चित प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । यसका लागि पहिले तरलताको पहिचान गर्ने त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने अनि उपयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यी तीन विषयहरु अन्तरसम्बन्धित भएकाले एउटाको सफल कार्यान्वयनले मात्र अर्कोको कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।
पहिचानको चरण तरलता व्यवस्थापनको आधारभुत चरण हो । यस अन्तर्गत तरलतालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न शीर्षकका मौज्दातको पहिचान गर्ने, पोजिसन निक्र्योल गर्ने, तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गर्ने काम गरिन्छ । यसबाट बैंकको तरल सम्पति तथा दायित्वको पहिचान हुन्छ । पहिचान गरिएको तरलताको अधिकतम आम्दानी हुने गरी उपयोग गर्न मद्दत गर्ने काम व्यवस्थापनको चरणमा गरिन्छ । यस अन्तर्गत तरल सम्पतिलाई एकिकृत गर्ने, समुहीकृत गर्ने तथा प्रयोग गर्ने काम गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पतिमा वृद्दि गर्ने उद्दश्यले निरन्तर गरिरहने कार्य तरलताको उपयोगको चरणमा हुन्छ । यसको लागि सवै मुद्राहरुको, सवै खाताहरुको र सबै ग्राहकहरुको तरलताको अवस्था जान्न सक्ने उच्चस्तरको समझदारीको आवश्यकता हुन्छ ।
अहिले नेपालमा तरलता अभावको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता बढी भए खिच्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ । तरलता प्रशोचनको लागि रिभर्स रिपो, सोझै बिक्री, निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको प्रयोग गरिन्छ भने तरलता प्रवाहको निम्ति रिपो र सोझै खरिद उपकरणको प्रयोग गरिन्छ ।
वर्तमान समयमा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ :
सीसीडी रेसियोमा कडाई
अहिले अधिकांश बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतनजिक पुगेको अवस्था छ । पहिले बैंकहरु ७८ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्थे । राष्ट्र बैंकले अर्को बैंकबाट सीसीडी रेसियो नै किन्न पाइने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु बिना संकोच कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसबारे अनुगमन गरी उचित विकल्प निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी खर्च वृद्धि
सरकारको पुँजीगत खर्च न्युन हुँदा पनि बैंकहरुमा तरलताको समस्या आइरहने गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्दा बजारमा रकमको कारोबार भइरहन्छ । यसले गर्दा तरलता अभाव हुन पाउँदैन । यद्यपि, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै विकास निर्माणमा ध्यान दिने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ । यसको समाधानका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुृपर्छ ।
शोधानान्तर घाटा नियन्त्रण
तरलता अभाव कम गर्न शोधानान्तर घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षभरी नै शोधानान्तर घाटा उच्च रहँदै आएको छ । शोधानान्तर घाटा हुनु भनेको मुलुकको पैसा बाहिर जानु हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ६० करोड मात्रै शोधनान्तर घाटा थियो । यसलाई रोक्न सके बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव कम गर्न सकिन्छ ।
बैंकमा बचत गर्ने बानीको विकास
अझै पनि कतिपय नेपालीहरुले पैसा बैंकमा नराखेर घरमै राख्ने वा गाउँमै व्याजमा लगाउने गर्छन् । सर्वसाधारणसँग भएको रकम बैंकिङ प्रणालीसम्म ल्याउन सक्यो भने पनि बैंकको तरलता समस्या केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ । यसका लागि गाउँगाउँमा जनचेतना फैलाएर सर्वसाधारणलाई बैंक पैसा जम्मा गर्ने र बैंकमार्फत कारोबार गर्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ ।